တချို့ကသွေးဖိအား meds ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်: လေ့လာချက် - သတင်း Rule
တချို့ကသွေးဖိအား meds ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်: လေ့လာချက်
အဘို့အအချို့သောသွေးဖိအားဆေးဝါးများယူသူအ Postmenopausal အမျိုးသမီးများ 10 အနှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မကျြနှာကိုနှစ်ကြိမ်အန္တရာယ် ရင်သားကင်ဆာ, အမေရိကန်သုတေသီတွေကတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်.
ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers ယူသူအမြိုးသမီးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ 2.4 သွေးတိုးရောဂါဆေးဝါးမယူခဲ့ပါတဲ့သူအမျိုးသမီးများထက်ရင်သားကင်ဆာ၏ 2.6 ဆပိုမြင့်အန္တရာယ်မှ, ထိုအတွက်သုတေသနကဆိုပါတယ် အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်.
“အချို့သောလေ့လာမှုတွေကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blocker အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်အကြားတစ်ဦးအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့အကြံပြုခဲ့ကြစဉ်တွင်, ဒီအထူးသဖြင့်ကယ်လ်စီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers ၏ရေရှည်လက်ရှိအသုံးရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောစောငျ့ရှောကျဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်,” လေ့လာမှုကဆိုသည်.
ကယ်လ်ဆီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers ထဲမှာနဝမအများဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးခဲ့ကြ ယူနိုက်တက်စတိတ် တွင် 2009, ကျော်နှင့်အတူ 90 သန်းဆေးညွှန်းပြည့်ဝ, ဂျေအေအမ်အေအညီ.
ဥပမာ amlodipine ပါဝင်, diltiazem, felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine, nisoldipine နှင့် verapamil.
“အခြား antihypertensive ဆေးဝါးများ – Diuretics ဆီး, beta-blockers နှင့် angiotensin II ကိုရန် – တိုးမြှင့်ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်မရကွ,” ထိုဂျေအေအမ်အေလေ့လာမှုကဆိုသည်.
သုတေသီတွေကအမျိုးသမီးတွေအသက်အရွယ်၏လူဦးရေကို အသုံးပြု. ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်ဆန်းစစ် 55 သို့ 74 အနောက်ပိုင်းရှိ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်. စုစုပေါင်း 880 ထိုးဖောက် ductal ရင်သားကင်ဆာခဲ့, 1,027 ထိုးဖောက် lobular ရင်သားကင်ဆာခဲ့ 856 အဘယ်သူမျှမကင်ဆာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်.
သူတို့ကကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers သုံးပြီးတွေ့ရှိ (CCB) ဘို့ 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအနှစ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် 2.4 ductal ရင်သားကင်ဆာကာလပိုမိုမြင့်မားလေးသာမှုနှင့် 2.6 lobular ရင်သားကင်ဆာကာလပိုမိုမြင့်မားလေးသာမှု.
“ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရေရှည် CCB အသုံးရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသောအယူအဆထောက်ခံခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး. စစ်မှန်တဲ့ အကယ်., ထိုအယူအဆသိသိသာသာလက်တွေ့နှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်,” ပက်ထရီရှာ Coogan အားဖြင့်ဂျေအေအမ်အေတစ်ခုပူးတှဲပါအယ်ဒီတာ့အာဘော်ကဆိုသည်, မှာ Slone ကူးစက်ရောဂါ Center မှာအကြီးတန်းကကူးစက်ရောဂါ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှ.
“နှစ်ခု အကယ်.- ဤလေ့လာမှု၌တွေ့အန္တရာယ်အတွက်သုံး-ခွံတိုးအတည်ပြုသည်, ရေရှည် CCB အသုံးပြုမှုအဓိက ပြင်ဆင်. တစ်ဦးအဖြစ်နေရာ၌ယူမယ်လို့ ရင်သားကင်ဆာသည်အစွန့်အချက်များ.”
ရင်သားကင်ဆာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်အသုံးအများဆုံးကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်. ထိုအဆိုအရ အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute, ယနေ့ဖွားမြင်ရှစ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တဦးတည်းသူမ၏တစ်သက်တာအတွက်ရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်.
ဤဆောင်ပါး, တချို့ကသွေးဖိအား meds ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်: လေ့လာချက်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
အရင်ကခံစားချက်မျိုးအားလုံးကျော်တဖန်: လေ့လာမှုရင်သားကင်ဆာစေရန်ကယ်လ်ဆီယမ်-Channel ကို blocker Links
ပိုမိုမြင့်မားသောရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့သွေးတိုးရောဂါများအတွက်ရေရှည်ကယ်လစီယမ်-channel blocker အသုံး
တချို့ကသွေးဖိအား meds ကင်ဆာအန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်
18921	0 Angiotensin II ကိုအဲဒီ receptor ရန်, ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှ, ရင်သားကင်ဆာ, ကယ်လ်ဆီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blocker, ဂျေအေအမ်အေ, အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute, ယူနိုက်တက်စတိတ်, ဝါရှင်တန်
← ကြီးမားသောမီး GUTS နိုင်ရိုဘီလေဆိပ်အဖြစ်ပရမ်းပတာ တိုဂိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းယူ 700 ဆင်စွယ်ကီလိုဂရမ် →